Musharaxa utaagan qabashada xilka Rasulwasaaraha Soomaaliya Dr Cabdi xaashi Aakhiro. | goboladaradio.com	Sunday, April 23rd, 2017	Home
Musharaxa utaagan qabashada xilka Rasulwasaaraha Soomaaliya Dr Cabdi xaashi Aakhiro.
Published on February 11, 2017 by admin · No Comments Ayadoo dhawaan dalka doorashadii ka dhaxday lagu doortay madaxweyne shacabku aad u soo dhaweeyeen Mohamed Cabdullahi Farmaajo lagana filayo in isbadal wayn lagu talaabsato 4,ta sano ee soo socota ayaa waxaa isu soo taagay buuxinta jagada rasulwasaare ee Dalka Soomaaliya Dr. Abdi Hashi oo ah aqoonyahan soomaaliyeed.
Mudane, Dr Cabdi Aakhiro wuxuu wax ku bartay dalka ingiriiska, wuxuu shahaaddada Bojularka BSc (Bochular of Sceince) ma qaatay jaamacadda Canterbury University, Wuxuu na masterka (MSc) iyo Phd da ku sameeyay jamacadda Middlesex University.
Dr Cabdi Xashi Aakhiro, oo ah musharax raysalwasaare ee Somalia, Cabdi Aakhiro waa borofasoor wax ka dhiga Jaamacadda City University London, ee dalka ingiriiska, gaar ahaam Iskuulka Caafimaadka iyo Sayniska. Dr Cabdi Aakhiro wuxuu kaloo ka shaqeeyaa isbitaalka Hammersmith Hospital ee ku yaal waqooyiga London.
Dr Cabdi Aakhiro wuxuu mudo 14 sano ah ka tirsanaa dadka u hadla (Speaker) Amnesty International , hayadda u dooda xuquuqda bani aadamka. Cabdi aakhiro wuxuu kaloo wax ka aasaasay ururka (Co-Founder) Darby Refugee Forum. Wuxuu kaloo sameeyay (Founder) ururka caawinta somaliyeed ee Somali Support Association.
Dr Cabdi Aakhiro wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka Somalida ah ee aadka bulshada qiimaha ugu leh, wuxuuna ku can baxay ololaynta iyo u hadlida shacabka soomaliyeed dal iyo dibadba.